Andron'ny Alimo - Howling Pixel
Ny Andron'ny Alimo dia vanimpotoana tany alohan'ny fotoana nandraiketana voalohany ny tantara, izay miavaka noho ny lanjan'ny fanefena alimo. Izany vanimpotoana izany dia mahatratra 2 000 taona eo ho eo, manomboka amin'ny taona 3000 hatramin'ny 2000 tal. J.K., ao amin'ireo faritra miavaka indrindra, dia ny any Atsinanana Akaiky, ny any Eoropa ary ny any Azia. Miovaova izany arakaraka ny faritra eto an-tany resahina izany ka sarotra ny mamaritra azy any amin'ny faritra sasany eto amin'izao tontolo izao sahala amin'ny any Amerika nisian'ny sivilizasiona prekolobiana izay nahafantatra ny fanefena volamena sy varahina hatramin'ny fahazoan'ny Espaniola ilay faritra nefa tsy hita tao ny fanefana alimo.
Ny alimo dia anarana mahafaobe iantsoana ny vokatry ny fanatsonihana miaraka ny varahina sy ny firapotsy. Amin'izao fotoana izao dia ekena fa mandimby ny Andron'ny Varahina ny Andron'ny Alimo sady dimbiasin'ny Andron'ny Vy, any amin'ny faritr'izao tontolo izao izay ahitana miavaka ireo vanimpotoana ireo. Miova be ny fari-potoan'ny Andron'ny Alimo arakaraka ny faritra sy ny kolontsaina heverina.
Ny Andron'ny Varahina dia vanimpotoana ao amin'ny Neolitika izay nahafahezan'ny olombelona ny fanefena varahina, talohan'ny fanefena alimo. Nandritra ny ampahany be amin'ny Neolitika dia niara-nisy amin'ny taozavatra amin'ny vato sy ny taolana ny fanefena varahina izay metaly malemy loatra amin'ny fanamboarana fitaovam-piasana sy fitaovam-piadiana. Tamin'ny Andron'ny Varahina dia nisy metaly hafa toy ny volamena sy ny volafotsy izay notefena koa hanamboarana fihaingoana, nefa ny famokarana fiotaovam-piasana sy fitaovam-piadiana dia natao indrindra tamin'ny vato sy ny taolana.
Ny Andron'ny Vy dia vanimpotoana miavaka noho ny fahefehezan'ny olombelona ny fanefena vy, izay nandimby ny Andron'ny Alimo. Miovaova be ihany anefa ny fari-potoan'ny Andron'ny Vy arakaraka ny faritra eto an-tany sy ny faritra misy ny kolontsaina resahina. Noho izany dia azo heverina ho mbola ao amin'ny vanipotoana alohan'ny tantara na ao amin'ny vanimpotoan'ny tantara ny Andron'ny Vy arakaraka ny faritra eto ambonin'ny tany resahina. Ny Andron'ny Vy dia manomboka amin'ny taona 11000 tal. J.K. ao amin'ny faritra mediteraneana, fa amin'ny taona 800 na 700 tal. J.K. izany any amin'ny tapany avaratr'i Eoropa, ary amin'ny taona 1000 tal. J.K. aty Afrika. Ny fanefena vy dia mila hafanana ambny dia ambony noho ny an'ny alimo, izay tratra noho ny fivoaran'ny fahaizana momba ny lafaoro.
Ny fiteny hitita na fiteny heteana izay fantatra koa amin'ny hoe fiteny nesita dia fiteny indo-eoropeana izay notenenin'ny Hitita na Heteana tamin'ny Andron'ny Alimo tao Anatolia. Ireo Hitita ireo dia namorona fanjakana lehibe ka ny ivony dia i Hatosa (Hattusa), izay ao amin'ny tapany avaratry ny Tany Atsinanana sy i Mesopotamia Ambony. Efa maty efa ela ny fiteny hitita ka ny soratra miendri-pantsika tavela no ahafantarana azy, izay voasoratra tany amin'ny taonjato faha-16 hatramin'ny taonjato faha-13 tal. J.K.
Tamin'ny tapany farany amin'ny Andron'ny Alimo dia nanomboka nanome toerana ny fiteny loviana izay mifanakaiky aminy ny fiteny hitita. Tamin'ny taonjato faha-13 tal. J.K. dia ny fiteny loviana na lovita no notenenina indrindra tao Hatosa renivohitry ny Hitita. Taorian'ny firodanan'ny Empira hitita tamin'ny tapany farany tamin'ny Andron'ny Alimo dia ny fiteny loviana no be mpiteny indrindra tao amin'ny fanjakana atao hoe siro-hitita tao amin'ny tapany atsimo-andrefan'i Anatolia sy ao amin'ny tapany avaratr'i Siria. Ny fiteny hitita no fiteny fantatra indrindra amin'ireo fiteny anatoliana izay isan'ny fiteny indo-eoropeana.
Ny fiteny ogaritika dia fiteny hamito-semitika tsy misy mpiteny intsony (fiteny maty) izay isan'ny fiteny kananeana, ao amin'ny vondrona avaratra-andrefan'ny fiteny semitika, notenenina tao amin'ny tanànan'i Ogarita tamin'ny Andron'ny Alimo tapany farany (taonjato faha-15 hatramin'ny faha-12 tal. J.K.). Ny abidia ogaritika, izay abidy tsy ahitana afa-tsy renisoratra (abjady), no nanoratana ny fiteny ogaritika.
Ny fiteny ogaritika dia fitenim-paritry ny fiteny amorita ka izy no sisa fantatra amin'ny endriky ny fiteny amorita voasoratra) izay fantatra tamin'ny alalan'ny nahitan'ny arkeologa frantsay ny lahatsoratra ogritika maro tamin'ny taona 1929 tao amin'ny sisam-paharavàn'ny tananan'i Ogarita (izay antsoina hoe Ras Shamra ao Siria ankehitriny). Nampiasian'ny mpikaroka io fiteny io mba hitadiavana fanazavana ny lahatsoratry ny Baiboly ka nahitana ny fifanindranan-dalan'ny kolontsain'ny vahoaka tao amin'ny fanjakàn'i Israely sy ny fanjakàn'i Jodà tamin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina amin'izy ireo.
Ny fiteny semitika dia vondrom-piteny nampiasaina tamin'ny Andro Taloha any Atsinana Akaiky (Azia Atsimo Andrefana) sy ao Afrika Avaratra ary ao amin'ny Tandrok'i Afrika. Isan'ireo fiteny atao hoe hamito-semitika na afro-aziatika na afraziana izy ireo ka miely avy amin'ny tapany avaratr'i Afrika hatrany Atsinana Akaiky. Nanomboka tamin'ny taona 1781 no nanomezan'ilay Alemàna atao hoe August Ludwig von Schlözer anarana toy izany ireo fiteny ireo araka ny anaran'olona iray ao amin'ny Baiboly, dia i Sema zanak'i Noa (na Nôe). Amin'izao fotoana izao dia ireto avy ny lehibe amin'ireo fiteny ireo: ny fiteny arabo, amarîka, tigrinia, hebreo, soreta na arameana tatsinana vaovao, arameana tandrefana vaovao, maltey ary siriaka. Mampiavaka ny fiteny semitika ny fampiasana fototeny foronina renifeo telo sy ny fampiasana renifeo tononina am-bavatraoka sy an-janadela ary anterina mafy.
Ny Horita dia vahoaka nonina tao Azia Minora (na Anatolia) tamin'ny Andro Taloha. Nanorina ny fanjakan'i Horý na Harý izy ireo tamin'ny fiandohan'ny taonarivo faharoa, tao amin'ny faritra mifanila ao avaratr'i Mesopotamia.
I Kafarnahoma na Kapernaomy dia tanana kely onenana mpanjono ao amin'ny faritanin'i Galilea (na Galilia), eo ampita avaratra-andrefan'ny farihy Tiberiada (na Tiberiasy izay atao hoe koa Genesareta na Jenezareta) ao amin'ny tapany avaratry ny Fanjakan'i Israely. Tamin'ny fitondran'ireo Hasmoneana, dia teo anelanelan'ny 6 sy 10 ha ny velaran'ity tanàna ity ary miisa 1 700 eo ho eo ny mponina ao aminy .